Shiinaha Marinka Caloosha Sambabaha Fududeeyaha Yokohama Nooca sabayn Dock Bumpers warshad iyo alaableyda | Haohang
Diyaarinta Markab Markab
Feeraha Rubber Pneumatic
Cilindrical (nooca C) Rubber Fender
M Ama V Ama W Nooca Fender
Unugga iyo Kondhiga Rubber Fender
Cadaadis Sare Cadaadis tuuboyinka koronto
Buufinta Balaastarka Caloosha Oogada
Xumbo EVA Buuxisay Fender
Xaashida Mat Rub
Marinka Caloosha Cudurka Mashiinka Yokohama Nooca Bumpers Doating
1. Nuugista tamarta sare 2. Xoog falcelin aad u hooseysa 3. Xiriirka u janjeera waa wanaagsan yahay inta lagu jiro hawlgalka 4. Feerka caagagga leh ee ku dhaca hawada ayaa dul sabayn doona biyaha, xitaa markabka oo ruxaya, waa la adeegsan karaa.
Goobta Asalka Shandong, Shiinaha
Magaca Sumadda Haohang
Magaca Badeecada Feeraha Rubber Pneumatic
Codsiga Dharka Badda
Shaqaynta Bixi Badbaadinta Max
MOQ 1 Deji
Shahaadada CE BV ISO
Damaanad 2 sano
Cabir Cabbirka loo habeeyay
Kartida Bixinta 1000 Gabal / Cadad Maalintii
Baakad & Gaarsiin
Faahfaahinta Baakadaha Xirmooyinka Seaworthy ee weelka
Tirada (Cadad 1 - 1 2 - 10 11 - 100 100
Est. Waqti (maalmo) 3 5 60 In lagu gorgortamo
Faahfaahin muuqaal ah
Tilmaanta Kooban ee Shirkadda:
Qingdao Haohang Fender Airbag Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa 1760 # Yanqing Rd, Degmada Jimo, Qingdao, Gobolka Shandong.
Waxaan ku takhasusay Markabka Launching Airbags, Marine Rubber Fenders,
Ferenti sabaynaysa Pneumatic, Fender Doomaha, Gaaska hawada, Gaaska Airbag Iwm.
Dhammaan alaabooyinkayagu waxay ansixiyeen CCS, BV, ABS, SGS IWM.
Waxaan leenahay warshad noo gaar ah oo aan ku farsameyno Rubber Nature oo leh mashiinka caaga,
Isku-darka iyo Isku-darka
Ku-hoggaansanaanta xulashada macaamiisha, shirkaddu waxay siisaa macaamiisha badeecooyin habeysan,
kuwaas oo loo dhoofiyo Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya, oo leh khibrad wax soo saar hodan ah,
- shuruudaha caadiga ah ee tayada sare leh, si loo daboolo baahida macaamiisha, dayactirka waqtiga ku habboon iyo iibka kadib,
ku soo dhawow inaad soo booqato warshadda, wada hadal iskaashi!
Waad ku mahadsantahay ogeysiiskaaga!
Nooca noocan oo kale ah:
Tani waa awood sare, iyo nidaamka suunka ka hortagga-daxalka. Muraayada caagku waxay leedahay silsiladda nambarka silsiladda, nooca siligga saafiga ah iyo nooca gogosha caagga ah.
Nooca feeraha-net Pneumatic:
Jirka suunka lagu sameeyo silsilad shabag ah ama shabag xargo iwm shabagyada silsiladaha ah ayaa awood u leh inay u adkeystaan ​​daxalka waqti dheer waxaana badanaa lagu dhisaa taayirro la isticmaalay iyo gacmo gashi caag ah si loo siiyo difaac dheeri ah. Shabakadaha Fiber waxay isticmaalaan kaliya gacmo gashi caag ah. Shabakadaha siliggu waa kuwo fudud oo si fudud loo dayactiray.
Astaamaha ugu muhiimsan ee muuqaalka feeraha caaggu waa:
Duufaanta waxaa lagu daboolay shabag silsilad taayir ah, tanina waxay dheereyneysaa nolosha adeegsiga dahaarka la buufin karo.
Waxaan u isticmaalnaa taayirka la isticmaalay shabaqa dabadayada, dhamaan taayirka waxaa lagu samayn doonaa daaweynta cusub, dusha sare ayaa qurux badan.
Silsiladdeenu waxay leedahay astaamaha ka-hortagga UV iyo daxalka badda. Silsiladaha oo dhami waa daaweyn looxidhay zinc. Waxaan sidoo kale leenahay xarig cufnaanta sare ee PP si aan u bedelno Chain, xariggan sidoo kale waa anti-UV, biyaha ka hortagga badda, ka-hortagga iyo nabaad-guurka.
Dhexroorku waa 0.2m ilaa 5m, dhererkiisuna waa 0.5m ilaa 12m.
Difaacaha sambabaha ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dabaylaha la buufin karo, waxay leeyihiin astaamaha soo socda:
1. Nuugista tamarta sare
Nuugista tamarta ayaa ah xogta farsamo ee ugu weyn ee feybarka caagga qaba. Markasta oo culeyska markabku kordho, tamarta saameynta markabka ee laxiriira xeebta ama maraakiibta kale waxay si aad ah usii kordheysaa inta lagu gudajiro howlaha. Tamarta weyn ee saameyntu waa in lagu qaataa cilladaha buuxa ee qallooca iyo aagga xiriirka ku filan. Qallooca cadaadiska foosha ee nabarkeena pneumatic wuxuu noqon karaa in ka badan 60%, aagga dusha sare ee xiriirka oo ku sii fidaya qallooca cadaadiska oo sii kordhaya. Awoodda nuugista tamarta ee fenders-ka ayaa aad uga badan noocyada kale ee wax gasha.
2. Xoog fal celin aad u hooseysa
Waxaan buuxineynaa hawada cadaadiska yar ee ku jirta gudaha wax lagu buufiyo, sidaas darteed cadaadiska gudaha waxaa loo kordhiyaa xaddidan inta lagu jiro ciribtirka cadaadiska
Sababtoo ah dusha sare ee xiriirka, sidaas darteed cadaadiska aagga markabka waa yar yahay. Marka loo barbardhigo maraakiibta kale ee wax lagu xidho, tani maahan
3. Xiriirka u janjeera ayaa wanaagsan inta lagu jiro hawlgalka
Maraakiibta, waa inay jiraan xagal gaar ah oo marinka xeebta ah iyo suurtagalnimada isku xirka markabka. Difaacayaasheena hawo-qabad leh ee la buufin karo ayaa aad ula qabsan kara xiriirada qalloocan marka loo eego kuwa kale.
4. Duufaanta caagga ah ee caaggu wuxuu dul sabayn doonaa biyaha, xitaa markabka oo ruxaya, waa la adeegsan karaa.
Yutung fallaarayaasha la buufin karo ayaa dul sabeynaya biyaha dushiisa (in ka badan 50% aagga jirka). Markay socoto, mowqifka dabka ma beddeli doono marka loo eego booska markabka. Gaar ahaan, marka markabku ku rogmado hirarka, fallaadhihii laalaabmay ayaa isku rog rogaya khilaaf yar. Sidaa darteed, ma dhaawici doonto dahaadhka maraakiibta, sidoo kale waxay fududayn kartaa lulidda iyo gariirka markabka.
Waxyaalahaas caagga ah ee wax lagu buufiyo ayaa si weyn loogu isticmaalay haamaha saliida, maraakiibta konteynarada, yaashiinnada, aaladaha badda, dekedo waaweyn, dekedda milatariga
Marka la barbardhigo suunka caagga ah ee laastikada ah, faarkeenna caagga ah ee la buufin karo wuxuu leeyahay faa'iidooyinka soo socda:
1. Nuugista tamarta waa weyn tahay, xoogga falcelinta saaran markabka ayaa yar.
2. Si fudud loo rakibo
3. Dabacsanaanta wanaagsan, kama beddeli doono cadaadiska
4. Iftiin iyo dhaqaale
Tijaabada waxqabadka muuqaalka hawada ee hawada
Attn.Pls Waxaan nahay alaab-qeybiye Raw Rubber Mat si loogu sameeyo Airbags. :
Fenders codsiga pneumatic:
1.Shato noocee ah ayaad ku bixin kartaa caagagga wax lagu buufiyo?
Jawaab: ISO CCS, BV, SGS iwm shahaadada waa la heli karaa.
2.Waa maxay muddada damaanad qaadka ah ee caaggaaga wax lagu buufin karo?
Jawaab: Waqtigayaga dammaanadda waa 24months
annaga ayaa mas'uul ka noqon doonna dayactirka ama kuu beddelayna caagga cusub ee wax lagu buufiyo ee adiga laguu buuxiyo haddii ay caddeyso inay tahay dhibaatadeena tayada.
3.Waa maxay nolosha mashiinkaaga caagaga la buufin karo?
Jawaab: Cimri ahaan loo qaabeeyey qalabka wax lagu buufiyo ee caaggu waa 6 illaa 10 sano
4.Waa maxay MOQ-da ee caaggaaga la buufin karo?
Jawaab: MOQ waa 1PC
5.Waxaan rabaa inaan isku dayo suumankaaga caagaga la buufin karo, laakiin waligey ma isticmaalo mana aqaano sida loo isticmaalo, ma i caawin kartaa?
Jawaab: Ha welwelin Waxaan u soo diri doonnaa buuga waxbarista oo ay weheliyaan suumanka caagga la buufin karo
6.Waxaan leeyahay maraakiib laakiin ma garanayo sida loo doorto cabbirka caagagga la buufin karo, miyaad i caawin kartaa?
Jawaab: Ha welwelin Pls ii sheeg macluumaadka markabkaaga, waxaan kuu soo jeedin karnaa cabirka iyo tirada kugu habboon ee caag ah
7.Ma tahay warshad ama shirkad ganacsi?
Jawaab: Waxaan nahay warshad wax soo saar, oo ku taal Qingdao
Hore: Monopile sabayn Polyurethane EVA Donut Fender
Xiga: Badeecadaha Shakhsiyeed ee Pneumatic Bumper - Markab Qaadista Sare oo Bilaabaya Airbag Qaadista iyo Soo Degitaanka - Haohang
Mashiinka Rubber Marine
Rubber D Fender
Fashiishayaasha Rubber Doomaha
Qolka 301 # 1st Cutubka 5 # Dhismaha YinZuoHuaFu YuanTou Rd. Degmada LiCang Qingdao City Shandong Gobolka Shiinaha.
Tel & Fakis:86-532-84688279
Moobayl:+ 86-13156366626 Mudane Ma.
Barkinta Hawada Badda, Boorsada Hawada ee Markabka, Shiinaha Rubber Fender, Block isku dhafan, Fender Rubber, Maraakiibta Tec,